Kusvira My Primary Teacher! She is the one who had taught me in Grade 5
Ndakanga ndakatozomba hangu paden irivaccation mdichangobva kucollege. Ndakambofunga kutenderera munharaunda yandakakurira ndikaguma ndabudikira pachikoro chandakadzidza. Ndakasvika ndokuona amwe madoors ese akavharwa ndikati zvimwe vaqaenda kuholiday sezvo kissimusi negoredzva zvanga zvichangodarika.
Ndaqaona paiva nesolar panze radio ichirira zvainzwika ndikati regai ndisvike tione. Ndakanonoka padoor ndiye dhuma dhuma meso navo vakatorara pasofa vakamonera zambia. Vakamuka ndokutouya vachifara zvikanzi haa Ndlindlo wandifungawo nhasi shuwa munhu wandakaguma kuona 2007 wanga uripi. Apa munhu akanga akufara but forgetting anezambia chete haana pant mukati maybe vakanga vabva kogeza ndokugara vachizora mafuta ndiye batwe nehope.
Vakanogara sofa raiva opposite neni ndokutanga kutaura neni nyaya vachibvunzawo kuti how was the college, harisi kuita musikanzwa here and so on satichawo vasangana nemwana wavo. Pavaibvunza zvese izvi ndakanga ndiri busy kutarisa beche ravo raioneka nechekure but waingoona kuti pane zvebeche apa.
Vakabva vasimuka ndokuenda mubedroom mavo zvikanzi ndikudzoka. Ndakaona sevaita nguva yarebesa ndokubva ndaseta camera kuti pavanozogara futi ndinotora video yebeche ndozonobonyoresa hangu mdakumba. Pavakadzoka vakanga vasina kumbochinja chaimbova chizambia ichocho. Ndakazonzwa voti saka kwakanaka here Ndlindlo kwawangotirova kasuprise kudayi. Ndikati yaah ndozviribhoo unowanawo vanhu vachangobva kogeza varismart. Vakatoseka havo zvikanzi smart yeyiko wakambindiona ndine tsvina here ini ndikati haiwa kufara hangu miss asi ndangoti ndidarike ndichiona miss vaiva vakanaka kukunda maticha ese pachikoro kuti havana kuchembera here. Vakaseka kusvika vadonha pasi ndipo pavakazoona kuti aisve vainge vasina kupfeka apa inini ndainge ndangogara ndakatarisa beche and rakanga rava pachena manje.
Ndakafamba ndakagara ndikaona munhu mufaro wakusvava ndikati don’t worry ndamunhu mkuru musatya.
Vakabva vaenda mubedroom kopfeka ndikatora phone yangu kutarisa kana video yangu yakanga yanyatsobuda bhoo bhoo. Ndaona yanyatsotora beche sezvariri and her face vachismiler vakanditarisa. Ndaqatadza kuresistor ndokubva ndasimuka ndikati miss ndakuda kuenda hanti hamuchade kuuya ingawani ndati hazvina basa. Kuti nyadzi dzipere ndaqaona kuti inini ndaifanira kuita action sekamukomana kechidiki ndokubva ndati it’s okay chionayiwo zvipere kana muchiti ndonoodza vanhu. Ndakadonhedza trouse mboro ndokubva yati svaku zvekuti vakamira vakafreezer vakayitarisa. Ndakaibata ndokutanga kuibonyora bonyora mbichana mbichana apa ndainge ndakaita kubata nemaoko ese. Ndakaona vofamba mbichana mbichana vouya zvikanzi please ndisvirewo mboro yako ndaifarira asi usaudza vanhu.
Handina kumbopindura asi ndakangovaradzika ndokutanga kuvakisser zvemufirimu chaizvo. Miss vaiva memajuce lips kana makambomanzwa hama, lip rinonaka kukunda huchi, kufara hangu. Takaramba tichikisana kusvika votanga kuchemerera zvekuti kana kuti mamwe maticha akanga asina kuenda kuholiday zvimwe takanzwika nematicha ese. Ndakavaudza kuti vaise volume yakawanda so that vanodarika vasanzwa zvinenge zvichiitika. Vakadzoka ndokubva ndavati varare havo nemusana vakarelaxer. I was the teacher now hanti ivo zvavakanga vandidzidzisa ndakazvibata so it was my turn now. Ndakadzika kumakumbo avo ndichivakissa mbichana mbichana kusvika ndasvika pabeche. Wakamboona beche rekuti ukaritarisa unombotanga kusmiler chete kunge munhu akupenga, ndozvaiita beche iri. Beche iri raiva rakarongedzwa. Shaved, matinji good size zvekuti kudhonza one one nerurimi waisambosema. Ndakatanga kuvadya beche ndikanzwa voti aaaa Ndlindlo wakazvionepi izvi,ayi ramba ichiita. Ndakafamba ndichitambisa matinji aya kusvika ndasvika pakabeans. Ndakatanga kukananzva nanzva nerurimi ndikanzwa Mai yoomba ichitunda zvekuti ndakatombopotsa ndakanwa muromo nebhutsu.
Ndaqatora mboro yangu ndokuinangisa pabeche ndikaona chiuno chosimudzwa kugashira mboro. Ndakatanga kukwiza pamukova webeche nemusoro wemboro, ndombopinza musoro mbichana ndobudisa ndikanzwa munhu ogwinha gwinha kepiri. Pandakada kuramba ndichitambisa mboro yangu pabeche ravo vakabva vangondidzonzera kwavari mboro ichinoti nyaaaaa . Mai yakashinyira ndikati don’t forget makambindirova so it’s payback time now. Ndatanga kuvasvira ndakamira ivo vari pakona yebed, ndikachinja position ndikatora makumbo avo ndokumaisa pamafudzi ndokutanga kurova chinhu. Beche at this position rinenge rava at 180 degrees mboro ichinosvika kuchibereko. Ndakavakwesha ndakadaro for about 12 good minutes ndokubva ndatunda. Ndakatunda asi mboro yangu yakaramba yakasimba ndokubva vauya pamusoro vondigarira. At first I was scared kuti ndotsikirirwa but ndakazotya porohwa chikapa. Vaitora mboro up and down vasina kana kunditsikirira zvekuti waingonzwa kuti hlapa hlapa hlapa vanhu vachisvirana.
Ndakazonzwa voti Ndlindlo ndakuda kutunda ndikati let’s change position titunde tese. Ndakavaudza down ndikati missionary position. Ndakatanga kurova beche zvemhere mhere nespeed yemberi apa tese takanga taingoita noise , aaaaa naka, were hande, svira Ndlindlo, ooo yess babe, yess miss, uuuuuu naka ndiye tsaaaaa tsaaaaa tsaaaaaaa tsaaaaa tsaaaaaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tese tichitundirana. Takamboramba takambundirana mboro ichiri mukati kudaro ndokubva ndazobudisa ndokumbozorora ndipaside pavo. Vakamuka ndokutouya kabucket ndokuisa mvura ndikuuya kwakutanga kundigezesa mboro inini ndokuvapukutawo beche ravo. Miss vakafara zvikanzi Ndlindlo wandisvira thanks, ndikangonzwa kuda kusvirwa ndouya hangu kuchikoro kwenyu wozosvira. Kana ndikaita ndochengeta hangu ndikati aewa chiitai semumhu mkuru miss. Chitsvakai mamorning after pills to avoid pregnancy but kusvirana pamada ma’am. Takaramba tongosvirana namaam till now vakangonzwa kuda mboro vanotofona voti the food is ready, should I come home or you shld. Ndozongoenda hangu coz I respect her
Kusvira My Primary Teacher! appeared first on Vanodazvinhu.com
Tags: kubatiwa ndichisvirwa, kubatwa ndichisvirwa, kusvira nyoro, kusvira teacher, kusvirana nyoro